Banky iraisam-pirenena : «Matetika tsy tonga ny talen-tsekoly» | NewsMada
Banky iraisam-pirenena : «Matetika tsy tonga ny talen-tsekoly»
Voarakitry ny tatitra nataon’ny banky iraisam-pirenena ho an’ity volana marsa ity fa matetika tsy tazana an-tsekoly ireo mpampianatra indrindra ny talen-tsekoly. Tafakatra 37% izay tahan’ny tsy fahatongavana izany.
Anisan’ny tena voamarika ho tsy tazana an-tsekoly matetika ny talen-tsekoly amin’ny sekolim-panjakana. Anisan’ny antony tsy haqhatongavan’ny mpampianatra manao ny asany ara-dalàna ihany koa io fahabangan’ny talen-tsekoly.
Tafakatra avo roa heny ( 55% raha 22%) ny tsy fahatongavan’ny mpampianatra rehefa tsy eo ny tale raha ny tatitra hatrany. Tonga amin’ilay fitenenana hoe “rehefa lasa ny saka dia mandihy ny totozy”.
Lany amin’ny zavatra hafa ankoatra ny fampianarana ihany koa ny 4%-n’ny fotoanan’ny mpampianatra rehefa ao an-dakilasy. Vokatr’izany, lasa ora telo amin’ny ora dimy sisa no tena mianatra ny mpianatra, rah any voalazan’ny tatitra hatrany.